ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5တစ်ဦးကပထမဦးစွာနေ့စွဲသည်ခွေးများအတွက် Friendly အကြံဉာဏ်များ
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ၏စိတ်ကူးရှည်လျားနှင့်ပြည့်စုံလျှင်, သူတို့ခင်ကိုရပ်တန့်အဆင်မပြေ pause နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုမှုများကိုသင်အယူခံမပါဘူး, ထို့နောက်သင့်နှင့်သင့်နေ့စွဲရဲ့ခွေးပါဝင်သောပထမဦးဆုံးနေ့စွဲစီစဉ်စဉ်းစား. သင့်ရဲ့ခွေးရှိမယ်ပင်လယ်အော်မှာအဆင်မပြေတိတ်ဆိတ်စွာနေနှင့်သင်နှစ်မျိုးစလုံးသင့်ဥပဓိရုပ်မှာအတွင်းပိုင်းကြည့်ပေးနိုင်ပါသည်. သင်တို့မူကားအဘယ်မှာရှိသွားသင့်တယ်? ငါးပါးကိုခွေး-friendly ရက်စွဲအတွေးအခေါ်များကိုစဉ်းစားပါ.
ခွေး-friendly စားသောက်ဆိုင်တွင်မှာထမင်းစားခန်း: စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာညစာစားပွဲကိုဖမ်းဆုပ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်ရေတွင်းတစ်တွင်းကအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့အိုင်ဒီယာဖြစ်တယ်. ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကိုခွေး-friendly စားသောက်ဆိုင်တွင်မှာစားခြင်းဖြင့်ကတစ်လှည့်ကွက် add မ? သင့်ရဲ့ဧရိယာတွင်ခွေး-friendly စားသောက်ဆိုင်တွင်တွေ့ရှိရန်, သင်အကြိုက်ဆုံးကို search engine ကိုအသုံးပြုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်အဘို့အသင့်အကြိုက်ဆုံးခွေးကိုဖက်ရှင်စတိုးစတိုးဆိုင်ကိုမေး.
လဟာပြင်ဖျော်ဖြေပွဲတက်ရောက်မည်: ခေတ်စားနေသောအချည်အနှောင်၏ hits ကစားတစ်ဦးအဖုံးတီးဝိုင်းမှခုန်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခန်းထဲကသံစုံတီးဝိုင်းဂန္ထဝင်ဂီတကစားရန်နားထောင်ခြင်းင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတခုတခုအပေါ်မှာပြင်ပဖျော်ဖြေပွဲတက်ရောက်သင့်ခွေးကိုထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းကောင်းတခုဖြစ်တယ်. ဖြစ်နိုင်လျှင်, တစ်ဦးပျော်ပွဲစားခြင်းတောင်းကိုဆောင်ခဲ့ကြနှင့်အချို့သောခွေးကို-friendly ရယူထားသောထည့်သွင်း, လွန်း. ့ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပရာနေရာခွေးခွင့်ပြုသေချာအောင်; သင်သာသူတို့မတက်နိုင်ပါတယ်ထွက်ရှာပါသင့်ရဲ့ pooches နှင့်အတူရောက်လာချင်ကြပါဘူး.
ခြေမပေါ်မှာသင့်ရဲ့မြို့ Explore: ရာသီဥတုနှင့်ညီညွတ်သောဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့မှတ်တိုင်မှာသင့်ရဲ့ခွေးနှင့်အတူတက်အစည်းအဝေးနှင့်ဧရိယာကိုရှာဖွေစူးစမ်းဖို့စဉ်းစား. လမ်းလျှောက်စသင့်ခွေးဟာသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပေးနေစဉ်အချင်းချင်းသိကျွမ်းဖို့စိတ်အေးလက်အေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ထို poop အိတ်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်!
ခွေးပန်းခြံမှာတွေ့ဆုံ: ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြီးမြန်ဆန်တဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲများအတွက်, ဒေသခံခွေးကိုပန်းခြံမှာသင့်ရဲ့ခွေးနှင့်အတူအစည်းအဝေးအကြံပြု. ဖမ်းတဲ့ဂိမ်းကစားနေစဉ်အတွင်းသင်နှင့်သင့်ခွေးလေ့ကျင့်ခန်းရနိုင်. ခွေးပန်းခြံမှာတွေ့ဆုံဖြေလျော့ပေးခြင်းရက်စွဲစောင့်ရှောက်, လွန်း; သင်ကပယ်ထိမှန်လျှင်, သင်ညစာထွက်သည်ကိုဦးတည်သွားနိုင်သည့်အကြံပြုချက်များ, ဒါပေမယ့်မီးပွားအတိအကျပျံလာကြဘူးဆိုရင်, သင်ရုံအိမ်ဦးနိုင်. သင်နှင့်သင့်သောခွေးသည်လက်ပေါ်မှာရေသန့်ပုလင်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, သင့်ရဲ့ခွေးအဘို့နှင့်ဖြစ်ကောင်းအချို့ရယူထားသော. သင်သည်ထို leash ဖမ်းပြီးမပြုမီ, သော်လည်း, ခွေးပန်းခြံတစ်ဦးအထူးခွင့်လိုင်စင်သို့မဟုတ်၎င်း tag ဖြင့်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ပထမဦးဆုံးစစ်ဆေး, သို့မဟုတ်သင်ကြိုတင်မဲအတွက်အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်.
ခွေးဆေးခန်းကိုတက်ရောက်ဖို့: ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခွေးကိုအတူစော်ကားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေးလူတန်းစားအပေါ်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူလူတန်းစားင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်ရဲ့နေ့စွဲနှင့်အတူတစ်ဦးခွေးအာရုံစူးစိုက်ဆေးခန်းတက်ရောက်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အဆင်ပြေ setting ကိုစီအခြားသိကျွမ်းဖို့နည်းလမ်းကောင်းတခုဖြစ်တယ်. သင့်ရဲ့ဧရိယာတွင်ခွေးဆေးခန်းကိုရှာဖွေရန်, သင်သည်သင်၏ဒေသခံတိရစ္ဆာန်အအမိုးအကာသို့မဟုတ်အထူးပြုခွေးကိုစတိုးဆိုင်စစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်.
အထူးသူတစ်ဦးဦးနှင့်၎င်းတို့၏ခွေးကိုတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲစီစဉ်လိုက်တဲ့အခါ, သူတို့တစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုဆောင်ခဲ့လျက်သက်သာခံစားသေချာအောင်. တချို့ခွေးတွေလူအစုအဝေး၌ဖြစ်စေအခြားခွေးနှင့်အတူညီညွတ်သောမဖြစ်စေခြင်းငှါ.
ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်နွယ်မှု၏ Sense သည် Making